itnadamtui: အွန်လိုင်းမှတဆင့် သီချင်းတိုက်ရိုက် ခံစားမှုပေးကြရအောင်
အွန်လိုင်းမှတဆင့် သီချင်းတိုက်ရိုက် ခံစားမှုပေးကြရအောင်
အွန်လိုင်းမှတဆင့် မိမိအသိမိတ်ဆွေများကို သီချင်း. ဗွီဒီယို. ဓါတ်ပုံများကို ဒါရိုက် ကြည့်ရု့ ခံစားဖို့ ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရအောင် နည်းလေးပါ. ၀ပ်ဆိုဒ် အကူနှင့်ပေါ့. ဆိုဒ်ထဲကို ၀င်လိုက်ရင် အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရမှာပါ.
singup လုပ်ပြီ အကောင့်ဖွင့်ပါ. မိမိအကောင့် ရလို့ ရှိရင် မိမိနေရာလေးမှာ တင်ချင်တာတင်လို့ရပါပြီ. အောက်ကပုံလေးက
Browse ကတဆင့် မိမိကွန်ပျူတာထဲက တင်ချင်တာကို ဖွင့်ပါ. ပြီးရင် upload ပေါ့. တင်လို့အထဲကို ရောက်သွားရင် မိမိတင်ထားတဲ့ ဟာကို ကလစ်လိုက်ပါ. အောက်ကပုံလေးလို.
တွေ့ပါလိမ့်မယ်. ယင်းအထဲက Embed ကိုရွေးလိုက်ရင် မြင်ရတဲ့အတိုင်း တွေ့မှာပါ. ဒါဆိုရပါပြီ ကုဒ်တွေကို copy ယူပြီး သုံးနိုင်ပါပြီ. ယင်းကုဒ်တွေကို gtalk မှာလည်းထည့်ပြီး မိတ်ဆွေများကို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်. လိပ်စာကိုကလစ်လိုက်ရင် လင့်တစ်ခုကျလာပြီး window media player လိုဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်. ဒီကုဒ်တွေကိုပဲ ning.com \_ blog တွေမှာလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်. အဲလိုသုံးမယ်ဆိုရင် အလျား နဲ့ အနံ ကို မိမိဥာဏ်ရှိသလို ချိန်ပြီမှသုံးတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်. နောက်ပြီ လိုင်းသိပ်မကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာသုံးရတာအဆင်ပြေအောင် ဖိုင်ဆိုဒ်ကို အတက်နိုင်ဆုံးငယ်ပြီ တင်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်. ဒီဆိုဒ်ထဲမှာ မိမိအတွက်နေရာလွတ်က 10GB free ပေးထားပါတယ်. သုံးပြီးသားကို ပြန်လည်ဖျက်လို့လည်းရပါတယ်. သီချင်းအပြင် 3gp နှင့် photo များကိုတင်ရင်း မိတ်ဆွေများကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု့ခံစားမှု ပေးခိုင်လို့ရပါကြောင်း. (မသိသေးသူများကို ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ) အားလုံးအဆင်ပြေမှုရှိကြပါစေ... ဆိုဒ်လိပ်စာက
source: Shinn Saw Pu
Indsendt af itnadamtui kl. 16.29